आफूले मन पराएको केटीले आफूलाई मन पराउँछिन् वा पराउदिनन् ? यसरी जान्नुहोस् – tvNepali.net
संसारमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको कुरा प्रेम नै हो । संसारमा सबभन्दा बढी परिभाषा गरेर पनि परिभाषित हुन नसकेको शब्द शायद ‘प्रेम’ हुनुपर्छ । प्रेमको विषयमा जति गीत र कविता कुनै पनि विषयमा लेखिएका छैनन् । अधिकाँश कथा उपन्यास र चलचित्रको मुख्य विषय पनि प्रेम नै हुन्छ । आज संसारमा जति पनि चलचित्रहरु बनेका छन्, जति जति गीतहरु सुन्नमा आएका छन्, ती सबैमा कुनै न कुनै तरिकाले माया र प्रेमकै भाव र गुणगान गाइएको हुन्छ। तर अझै पनि कसैले प्रेम यो हो रयसकारण हुन्छ भन्न सकेको छैन । बैज्ञानिकहरुले प्रेम किन हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न तर्क अघि सारेका छन् तर ती पनि सर्वमान्य छैनन् ।
मानिसहरु प्रेम किन हुन्छ र के हो प्रेम भन्ने विषयमा सदियौंदेखि खोज र अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । आफूले मन पराएको कुनै केटी वा युवतीले आफूलाई मन पराउँछिन् वा पराउदिनन् जान्ने इच्छा पनि सबैमा हुन्छ । तर जान्ने कसरी – एक अर्कासित पूर्णतया नखुलेसम्म सोझै सोधी हाल्ने वा ‘आइ लभ यू’ भनि हाल्ने अवस्था पनि हुन्न । त्यसैले अनेक व्यक्ति महिनौ द्धिविधामा हुन्छन् । तर यहाँ हामीले केही टिप्स दिएको छौ । यसको आधारले तपाईले चाहेको साथीले तपाईलाई प्रेम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । उसले तपाईलाई प्रेम गर्छिन् भन्ने कुरा थाहा पाउन भिडियो हेरनुहोस :
PreviousPrevious post:तपाईको आजको राशीफल हेरनुहोस – 2075/10/23, बुधबार
Next Next post:प्रेमको स्पष्ट परिभाषा, आखिर किन हुन्छ प्रेम ? Valentines Day Special